Weligaa Gurigaaga ma burburaayo hadii arintan lagaa helo (Sirta Qoyska) | Gaaloos.com
Home » galmada » Weligaa Gurigaaga ma burburaayo hadii arintan lagaa helo (Sirta Qoyska)
Weligaa Gurigaaga ma burburaayo hadii arintan lagaa helo (Sirta Qoyska)
Sirta Iyo Sabata qoyska u burburo ayaa maanta idiin haynaa waxaana halkan ka helaysa sir badan oo aad uga gaashaaman karayso in aanu burburin Gurigaaga.
Inta badan waxaa la sheegaa inay keento burburka guryaha sababo badan oo ay ka mid tahay sabarka iyo dulqaadka oo aad u yar ,ismaan dhaaf,iyo isfahmi waa aan caadi ahayn kalsoonida oo aad u yar iyo waliba guriga oo marka hore ku dhismo si qaldan iyo dariiq aan sax ahayn.
Waxaa kaloo la sheegaa inay keento burburka labada lamaane oo kala fog oo kukala nool laba qaaradood taasna waxay noqotay carqaladaha hada ugu badan ee burburka guryaha keenta maadaama aad lookala fogaday burburkii wadanka kadib waxaa kaloo lasheegaa inay mararka qaar sabab u yihiin waalidiinta labada dhinac ayadoo mararka qaar ay ku ku qasbaya wiilka inuu furo gabadhaa is fahmi wey ay ayaga iyo gabadhu is fahmi la,yihiin darteed , ama dhanka kale walidka gabadha oo ayagana mar waliba laga sheegto qaasatan hooyooyinka inay mar walba gabadhu ku yirahdaan noloshaan kulama jecli ee iska fur ninkaan taasna ay keentay inay burburaan guryo badan.
Waxaa kaloo jira dad ka shaqeeyo burburka guryaha oo ba ka dhigtay mihnad .
intaas oo asbaab ah iyo kabadan baa lasheegay inay burburiyaan guryaha hadaba maxaan ku badbaadin karnaa guryaha si aysan u dayacmin caruurta?
Waxaan leenahay walaalaha isqaba ilaahay ka baqa oo ilaaliya guryihiina caruurtiinan ka fakara, isu sabra .iska jira dadka shaqada ka dhigta gurya duminta .gabdhahana waxaan leeyahay isku daya inaad ka dhigataan waalidka sayigiina walidkiin oo kale si loo helo sacaado waarta.
Sidoo kale waalidkana waxaan leenahay rabi ka baqa kana fakara mustaqbalka reerkaa dhisan ku dadaala badbaadintiisa iskana ilooba qaladaadkii dhacay.
badbaadada gurigaada waxaad ku heli kartaa inaad rabi ku xiranto lana timaado sabar iyo dulqaad iyo waliba tanaasul iyo isqadarin .
Talo Iyo Tusaale walba Hoyga Sirta Nolosha wacdaraha.com ayaa kuu haya.
Title: Weligaa Gurigaaga ma burburaayo hadii arintan lagaa helo (Sirta Qoyska)